The Beauty Inside – Gold Channel Movies
1Season 1 Oct. 01, 2018
The Secret Oct. 01, 2018
I Know Who You Are Oct. 02, 2018
You Recognized Me! Oct. 08, 2018
The Agreement Oct. 09, 2018
The Couple of the Century Oct. 15, 2018
Mom Collapsed Oct. 16, 2018
But I’m SuchaMess Oct. 22, 2018
Could Someone Like Me Love You? Oct. 23, 2018
Mother’s Unexpected Visit Oct. 29, 2018
I Love You, Mom Oct. 30, 2018
She’s Hiding Something Nov. 05, 2018
Yu Ri Getting Closer Nov. 06, 2018
Can You Still Love Her? Nov. 12, 2018
Let’s Break Up Nov. 13, 2018
So This is What You Look Like Nov. 19, 2018
To Love You, and Myself Nov. 20, 2018
(ဟန်ဆယ်ဂရယ်)က နာမည်ကျော်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ သူမနဲ့ပတ်သက်လို့ ကောလဟာလပေါင်းများစွာထွက်ပေါ်နေပေမယ့် အမှန်တရားက ဘယ်ဟာဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိကြပါဘူး။ တကယ်တော့ သူမက တစ်လတစ်ကြိမ် အခြားသူတစ်ယောက်အဖြစ် ထူးဆန်းစွာပြောင်းလဲနေပါတယ်။
❤(ဆောဒိုဂျယ်)က လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုရဲ့ဌာနမှူးချုပ်ပါ။ အရမ်းထက်မြတ်ပြီး ခံ့ညားချောမောသူဖြစ်ပေမယ့် မျက်နှာမမှတ်မိတဲ့ရောဂါကို ခံစားနေရပါတယ်။ အဲဒီရောဂါက သူ့ဘဝကို ထိခိုက်စေမှာစိုးတာကြောင့် ရောဂါအကြောင်းကို လျှို့ဝှက်ထားပါတယ်။
❤ဆောဒိုဂျယ်က ဟန်ဆယ်ဂရယ်နဲ့သိကျွမ်းလာတဲ့အခါ သူမရဲ့မျက်နှာကိုတော့ ထူးဆန်းစွာပဲမှတ်မိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟန်ဆယ်ဂရယ်ရဲ့မျက်နှာအမြဲပြောင်းလဲနေတာက ပြဿနာပါ။ သူတို့နှစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စိတ်ဝင်စားလာကြတဲ့အခါ အချင်းချင်းရဲ့လျှို့ဝျက်ချက်တွေကို လျစ်လျူရှုပြီး ရင်ထဲကတကယ့်အလှတရားအစစ်အပေါ်တစိုက်မတ်မတ်အာရုံထားနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကတော့……..
Reviewed by Gold Channel
Translated by Youn Kyi Phyu
Original title 뷰티 인사이드
First air date Oct. 01, 2018
Last air date Nov. 20, 2018
MgBravoFebruary 3, 2019Reply
ပြန်တင်ပေးတာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် GC ရေ
Di DiMarch 19, 2019Reply
reply 1997 တင်ပေးပါ GC
htu lin ooApril 7, 2019Reply
11 ပြန်တင်ပေးပါ GC erro တတ်နေလို့ပါ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
Htun KyanMay 9, 2019Reply
Hawaii5O, NCIS-LA , My only one(korea), blow breeze (korea) ဘာသာပြန်ပေးပါလား ဘဝမှာ ကြည့်ချင်ဆုံးကားတွေမို့
[email protected]May 19, 2019Reply
YunnAugust 13, 2019Reply
ep 12, 15 ပြန်တင်ပေးပါ GC Down လို့ မရလို့ပါ အမြဲအားပေးနေပါတယ်GC
gcmoviesAugust 14, 2019Reply
YunnAugust 14, 2019Reply
file not found ဖြစ်နေတယ် Down မရသေးဘုး GC
gcmoviesAugust 15, 2019Reply
မိုးမိုးSeptember 24, 2019Reply
My lovely sam soon တင်​​ပေးပါလား
mmOctober 3, 2019Reply
Can’t download (7,11,13,16)
Hanna Season 1 (မြန်မာစာတန်းထိုး)